retrogamers များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Carmen rodriguez | | အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် သူတို့ကို ၈၀ နဲ့ ၉၀ အတွင်းလူကြိုက်များခဲ့တယ်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလူတိုင်းသိကြသည်။ Nintendo, Play Station, XBox, Wii စသည်ဖြင့်တစ်ခါမှမကစားဖူးသူတစ်ယောက်မှကျန်တော့မည်မထင်ပါ။
သူတို့အားပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုချစ်သူများသည် အထင်ရှားဆုံးစမတ်ဖုန်းများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခဲ့သည်ဒီနေရာမှာမင်းကိုအများဆုံးခေါ်ဝေါ်သူအချို့ကိုခေါ်ပြီးအခုခေါ်နေသူတွေပါ ရက်တွေ.
4 နှစ်ချက်နဂါး Trilogy ပာ
7 Mega က Man X
8 Metal ပက်ကျိ
12 Sonic: အဆိုပါ Hedgehog
၎င်းသည် Taito မှတီထွင်ခဲ့သော Arcade ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည် 1986။ ၎င်းသည် ၇၀ ကျော်၏ Atari Breakouts အပေါ်အခြေခံသည်။ ကစားသမားသည်«ဟုခေါ်သောပလက်ဖောင်းငယ်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်သည်။အာကာသယာဉ်အမျိုးမျိုး", ဘာ ဘောလုံးကိုကစားကွင်းမှထွက်ခွာခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထိပ်မှာ«အုတ်"ဒါမှမဟုတ်"လုပ်ကွက်«, ဘောလုံးကိုတို့ထိတဲ့အခါမှာပျောက်ကွယ်သွားသော။ အုတ်မရှိတော့သည့်အခါကစားသမားသည်နောက်တဆင့်သို့ပြောင်းသွားသည်။ သူသည်နောက်ထပ်လုပ်ကွက်ပုံစံပေါ်လာမည်။
၎င်းတွင်ဖန်တီးထားသောကားဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် 1997 အရာအပါအဝင်ထွက်သည်ရပ်နေ၏ အကြမ်းဖက်မှု၏သိသာထင်ရှားသောအချိုးအစား သူတို့ရဲ့ဂိမ်း mode မှာ။ ဂိမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပြိုင်ပွဲကိုအပြီးသတ်ရန်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်နေသောကားများကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်လမ်းလျှောက်သူများကိုကျော်ပြေးခြင်းသည်မက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့အချိန်တွင်သူသည်အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုကြောင့်သူ့ကိုထိပ်တန်းအရောင်းနေရာများသို့ ဦး တည်စေခဲ့သည်။
ဂိမ်းက ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံသည် 1975 မှဒါရိုက်တာ Paul Bartel, Death Race 2000, အရာအားဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် Sylvester Stallone y David carradine.
၎င်းသည်၎င်း၏ Arcade ဗားရှင်းတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 1999 ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ Dreamcast အတွက်၊ PlayStation2နှင့် GameCube console များအတွက်ဗားရှင်းရှိသည် နှင့် 2001 ခုနှစ် PC အတွက်။
ကစားသမားသည်အငှားယာဉ်မောင်း (၄) ဦး အနက် (Axel, BD Joe, Gena နှင့် Gus) သို့ရွေးချယ်နိုင်သည် လူတွေကိုကောက်ပြီးသူတို့ကိုယူ အချိန်ကုန်ဆုံးမတိုင်မီညွှန်ပြမြှားညွှန်ပြဘယ်မှာ။ လမ်းတစ်လျှောက်သင်သည်အခြားမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အဆက်အသွယ်များကဲ့သို့သောလှည့်ကွက်များဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။
နှစ်ချက်နဂါး Trilogy ပာ
အဆိုပါ Saga နှင့်အတူ Arcade အတွက်ပွဲ ဦး ထွက် နှစ်ချက်နဂါး မူရင်း 1987။ ၎င်းသည်မူလက Technos Japan မှတီထွင်ထားသော beat 'em up အမျိုးအစား၏ဂန္ထဝင်ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းကကောင်းတယ် ကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအထူးသဖြင့် ဘရုစ်လီနဂါးစစ်ဆင်ရေးကဲ့သို့; မြောက်ကိုရီးယား၏နာမည်ကြီး anime လက်သီးကိုအခြေခံပြီး post-apocalyptic ဆက်တင်။
အဆိုပါဂိမ်း Saga နေသော Billy နှင့် Jimmy Lee က, အမွှာသရုပ်ဆောင် Sōsukukenဟုခေါ်သောစိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ခံပညာသင်တန်းသားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောပြိုင်ဘက်များနှင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ နှစ်ချက်နဂါး ကွဲပြားခြားနားသော consoles စအပေါ်အများအပြားနောက်ဆက်တွဲများနှင့်ဗားရှင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ Saga ၏လူကြိုက်များမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာတွန်းရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်ရုပ်ရှင်လည်းရှိခဲ့သည်.
ဒါဟာဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုပါ ပထမဆုံးလူရိုက်ခြင်း (FSP) ၌တည်၏ 3D, 3D Realms အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖြန့်ဝေ 1996.
in ၌မတိုင်မီကအမျိုးအစားများ၏ဗီဒီယိုဂိမ်းဆန့်ကျင်, in Duke Nukem 3D မင်းကြည့်လို့ရတယ် အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်လမ်းများမှရေနစ်မြုပ်နေသောမြို့များသို့မဟုတ်အာကာသစခန်းများသို့ပွင့်လင်းသောနေရာများနှင့်လေထုများပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်ဤအဆင့်များသည်လုံးဝဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသောကြောင့် nook နှင့် crannies အမြောက်အမြားရှိသည်။ multiplayer များအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှု.
အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော တစ္ဆေနှင့် goblinsCapcom မှဖန်တီးထားသော arcade platformer ဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် 1985 ။ ကစားသမားကaမင်္ဂလာပါ, ခေါ် ဆာအာသာသူအလိုရှိသည့်လှံများ၊ ဓားမြှောင်များ၊ မင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်ရန်ဖုတ်ကောင်များ၊ နတ်ဆိုးများနှင့်အခြား spooky သတ္တဝါများကိုအနိုင်ယူပါ.
Mega က Man X
ဒါဟာတီထွင်တဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် 1993 Capcom မှပထမဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည် စီးရီး Mega က Man X y အဓိကအားဖို့ခြေလှမ်းအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည် တိုးတက်မှု ၏ဗီဒီယိုဂိမ်းကနေMega က Man NES မှ Super Nintendo အထိဖြစ်သည်။
ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် မျက်နှာပြင်ရှစ်ခုကိုသက်ဆိုင်ရာသူဌေးများနှင့်ရှင်းလင်းပါ (လက်နက်များကိုစွမ်းအားအရရယူခြင်း)၊ ထို့နောက်နောက်ဆုံးသူဌေးဆီသို့ ဦး တည်စေသောအပိုမျက်နှာပြင် ၃ ခုသို့မဟုတ် ၄ ခုကိုဖြတ်ကျော်ရန်။ ဖန်သားပြင်တစ်ခုစီတွင်ပြန့်ကျဲနေသောအချို့အရာများရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ယခင်ဖန်သားပြင်မှရရှိသောစွမ်းအားများဖြင့်သာရရှိသည်။
၎င်းသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းစီးရီးဖြစ်သည် ပြေးနှင့်သေနတ်အမျိုးအစား SNK မှဖန်တီးခဲ့သည့် Neo-Geo Arcade စက်များနှင့်ဂိမ်းစက်များတွင်အစပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဒီဂိမ်းကအရမ်းပါပဲ ဟာသဉာဏ်နှင့် handcrafted ကာတွန်းကားလူသိများသည်၎င်းသည်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အထူးချွန်ဆုံးသောစီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်အုပ်စုကခေါ်ယူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်လာတယ် Peregrine Falcon Squad (Peregrin လင်းတ) အာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားမှုတားဆီးရမယ် သူပုန်တပ်၏ခေါင်းဆောင်နှင့်စီးရီး၏အဓိကရန်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီး Morden မှရည်ရွယ်သည်။
၎င်းသည် Namco ကုမ္ပဏီမှဗီဒီယိုဂိမ်းဒီဇိုင်နာ Toru Iwatani တီထွင်ခဲ့သောနှစ်များအစတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သော Arcade ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည်။ 1980။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွင်ကမ္ဘာချီဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည် အောင်မြင်သော Arcade Video Game အတွက် Guinness Record ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၇ ခုနှစ်အထိစုစုပေါင်းစက်အလုံးပေါင်း ၂၉၃၈၂၂ လုံးဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။
၏ဂန္ခေါင်းစဉ် အဝါရောင်တစ္ဆေ - စားဇာတ်ကောင်သူဝင်္ကနေတဆင့်သူ၏လမ်းစေသည်အဖြစ်။
မူလက Apple II အတွက်ဖြန့်ချိ 1989။ Sultan သည်စစ်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲရန်သူ၏နိုင်ငံနှင့်ဝေးသောအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ဆိုးဝါးသော vizier Jaffar သည်အာဏာကိုသိမ်းယူရန်အခွင့်အလမ်းယခုအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ လုပ်ရန် မင်းသမီးရရှိထားသည်။ ဇတ်ကောင်သည်ဝေးလံသောပြည်မှလူငယ်စွန့်စားစွန့်စားသူနှင့်မင်းသမီး၏စစ်မှန်သောအချစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ယခုအခါရဲတိုက်ထဲသို့ချပစ်ခံခဲ့ရသည် Jaffar မှပေးသောအချိန်ကာလမပြည့်မှီလွတ်မြောက်ရမည် မင်းသမီးကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ်။
ဒီဂိမ်းမှာ ရှုထောင်ရှုထောင့်။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘေးထွက်အမြင်ကနေပေါ်ထွက်လာ။ မျက်နှာပြင် scrolling မရှိပါ (scrolling).
ဒါဟာဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် street Fighter။ စီးရီးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်း street Fighter ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားမှုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအစပျိုးရန် တိုက်ခိုက်နေအမျိုးအစား။ Capcom ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ခဲ့သည်။ မတ်လအတွက် Arcade တွင်ထင်ရှား၏ 1991 ဂျပန်နှင့်ချက်ချင်းကမ္ဘာ၏ကျန်များအတွက်။
အင်္ဂါရပ်တွေ ရွေးချယ်ရန်ဇာတ်ကောင် ၈ ခု၊ နောက်ဆုံးအကြီးအကဲ ၄ ယောက်နှင့်ဇာတ်ကောင်ချင်းစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိဂုံး။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့ပင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအထူးတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်လီဗာနှင့်ခလုတ်ပေါင်းစပ်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။နဂါးငွေ့တန်း»ဒီတော့သူတို့ကိုအောင်မြင်သောဂိမ်းထဲမှာကူးယူ။
Sonic: အဆိုပါ Hedgehog
ယခုနှစ် 1989 ဗီဒီယိုဂိမ်းကုမ္ပဏီ Nintendo သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် စူပါမာရီယို Bros, ဒီဂိမ်းဟာနာမည်ကြီးလာပြီး Sega ဟာဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုဖန်တီးရတယ် Nintendo နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဒါကြောင့်အဲလက်စ်ကစ်ဒ်ကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ဗီဒီယိုဂိမ်းဒီဇိုင်နာ Yuji naka ဇာတ်ကောင်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ် Sonic အ Hedgehog ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်တူဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဖွင့်လိုက်တယ် 1991.
Sonic Hedgehog နှင့်အတူဂန္ထဝင်ဇုန် (၇) ခုမှလျှပ်စီးမြန်ခြင်းဖြင့်ပြေးပါ။ ပြေးနှင့်ကွင်းဆက်မှတဆင့်လိမ် သင်လက်စွပ်ရနှင့်သင်၏ရန်သူများကိုအနိုင်ယူ မကောင်းသောဒေါက်တာ Eggman ကနေကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ရန်သင်၏မစ်ရှင်အပေါ်။
Tetris (Russian: Те́трис) သည်မူလဒီဇိုင်းနှင့်ပရိုဂရမ်ရေးသားထားသောပဟေvideoိဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Alexey Pazhitnov, ကိုဇွန် ၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 1984 ။ ဒီဂိမ်းကဂရိကိန်းဂဏန်းရှေ့ဆက်ကနေသူ့နာမည်ကိုရရှိသည် တေးTetrominos ဟုလူသိများသောဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အပိုင်း ၄ ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
ကစားသမားသည် tetrominos ပြိုလဲမှုကိုတားဆီးနိူင်သည် အဆိုပါလည်ပတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (0 °, 90 °, 180 °, 270 °) ဘယ်မှာလဲသင့်တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာအလျားလိုက်လိုင်း ပြီးစီးခဲ့သည်, ထိုလိုင်းပျောက်ကွယ်သွားသည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်းအစအားလုံးသည်နေရာတစ်ခုတည်းသို့ဆင်းသွားပြီးကစားရန်နေရာလွတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်အပိုင်းအစအသစ်များကိုနေရာချထားသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အဖြစ်အပျက် ဂရပ် ကသဘောပေါက် LucasFilm အားကစားပြိုင်ပွဲ en 1990 ပင်လယ်ဓားပြပုံပြင်များကိုပြုပြင်ထားသည့်နေရာတွင်ရယ်စရာကောင်းသောကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
ဒီကိစ္စဟာကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုရှိမဲလီကျွန်းပေါ်တွင်စတင်သည် Guybrush Threepwood အမည်ရှိလူငယ်တစ် ဦး သည်ပင်လယ်ဓားပြဖြစ်လိုသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သူ့ကိုသူအပ်နှင်းထားတဲ့ပင်လယ်ဓားပြခေါင်းဆောင်တွေကိုရှာတယ် စိန်ခေါ်မှုသုံးခု ပင်လယ်ဓားပြတစ် ဦး ဖြစ်လာရန် - ဓားနှင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုဖြင့်ကာတွန်းမာစတာကာ့ကိုအနိုင်ယူသည်။ ဘုရင်ခံ၏အိမ်တော်မှရုပ်တုကိုခိုးယူသည်; သင်္ဂြိုဟ်သောဘဏ္treာကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။
ဒါဟာဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုပါ ပထမဆုံးလူရိုက်ခြင်း အရာကို PC များအတွက်အမျိုးအစားလူကြိုက်များခဲ့သည်။ ၎င်းကို Id Software မှဖန်တီးခဲ့ပြီး Apogee Software မှမေလတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည် 1992။ ဒီဂိမ်း ၎င်း၏အမျိုးအစားအတွက်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကစားသမားဝီလျံဂျေ Blazkowicz ဖြစ်ပါသည်, un သူလျှို အမေရိကန်ကြိုးစားနေသည် နာဇီရဲတိုက်မှလွတ်မြောက် သောသူတစ် ဦး အကျဉ်းသားဖြစ်သည့်အတွက်။ အဆောက်အ ဦး တွင်လျှို့ဝှက်အခန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိပြီးအစားအစာရိက္ခာများနှင့်ရှေး ဦး သူနာပြုပစ္စည်းများနှင့်လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်အမျိုးအစားများပါ ၀ င်ပြီးကစားသမားအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဂိမ်းကစားသူများအတွက်မှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းစာရင်း la VGChartz ဂိမ်းဒေတာဘေ့စ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » retrogamers များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများ
ထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Melancholie ၏အားသာချက်ယူ "စျေးကြီး" ဖြစ်လေ့ !! မကောင်းဘူး
ခင်ဗျားနဲ့သဘောတူတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့မှာ iPhone တစ်ခုထက်ပိုမထားကိုငါမခံရပ်နိုင်ဘူး။
Plants vs Zombies2သည်အဆင့်များနှင့်ပျော်စရာများစွာဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်